အဖှဲ့အစညျး | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > အဖှဲ့အစညျး
သငျသညျအစဉျအမွဲတဲ့အံ့သြစရာအခွင့်အလမ်းလွဲချော်နှင့်သင့်အိပ်မက်တွေကိုချိုးဖဲ့ခဲ့တူသောခံစားခဲ့ရပါတယ် အကယ်., ဒါဟာအခွင့်အလမ်းများကိုသူတို့ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာကိုအမြဲမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသိရန်သင်ကူညီစေခြင်းငှါ,.
သင်သည်သင်၏အသစ်ကအလုပ်ရှင်နှင့်အတူကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံခဲ့သည်နှင့်စတင်နေ့စွဲသတ်မှတ်ထားပါဘူးပြီးတာနဲ့, သိသာလာမယ့်ခြေလှမ်းသင့်လက်ရှိအလုပ်ရှင်သင်ထွက်ခွာပါလိမ့်မယ်သိစေရန်ဖြစ်ပါသည်. နှုတ်ထွက်စာ၏အကျဉ်းစာတစ်စောင်ရေးထား (အဲဒီမှာသည်စစ်ဆင်ရေးစကားလုံး "အကျဉ်း"). သငျသညျအနညျးငယျတိုတောင်းစာကြောင်းထက်ပိုဘာမှမရေးသားဖို့တစ်ဦးသစ္စာရှိမှုထဲကလိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရလျှင်, ဒါကြောင့်တားဆီးရန်. သင့်ရဲ့စာကိုအောက်ပါနှစ်ခုရှိပါတယ်ဆံ့ရန်လိုအပ်ပါသည်တစ်ခုတည်းသောသတင်းအချက်အလက်များ (ဖြစ်နိုင်သည်သုံး) ပစ္စည်းများ: -- သင်သည်သင်၏လက်ရှိသံလိုက်အိမ်မြှောင်ကစားနည်းထွက်ခွာကြသည် ...
သင်သည်သင်၏အာမခံလိုင်စင်ရှိသည်နှင့်မုန်တိုင်းအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းယူဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ် Do? သင်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရအေးဂျင့် Are, Adjustments, underwriter, သို့မဟုတ်ပွဲစားတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုစိန်ခေါ်မှုရှာဖွေနေ?
ယောဘသည်အမဲလိုက်: အခြားသူများနှင့်အတူ Networking အောင်မြင်ဖို့သော့ချက်များဖြစ်ပါတယ်
ရှေ့နေအကူ – သင်သိပါရန်လိုအပ်ထိပ်တန်းအဖွဲ့အစည်းများ
Network မှ Marketing ကိုသင်တန်း — အောင်မြင်ဘို့အသင့်နယူးဖြန့်ဖြူးလက်နက်
One of the most key elements of success inajob search is the resume and the engineering resume can often be one of the more difficult documents to develop. The engineering resume is the engineering job seeker's primary marketing document that sells the product ' the skills and experience of the engineer. ထိရောက်သောဖြစ်, an engineering resume must grab the attention of the reader in 35-45 စက္ကန့်. A good engineering resume will extend that attention span to overaminute. A...
စစ်မှန်သောအကူအညီ Vs. အသုံးပြုခြင်း
Networking isapopular buzzword these days. Every blogger seems to be talking about Networking, Buzz Marketing and Word of Mouth Marketing. သို့သော်, not many of them seem to be presenting specific strategies for making the most of local networking groups. This is why I decided to write this article.
One of your biggest fears of retirement may not be giving up the hustle and bustle of the working world but remaining socially connected. နောက်ဆုံးတော့, with your coworkers, you have likely made some close personal friendships. You likely treasure them and consider them as closer (if not closer) than your family members and other friends outside the work force. ကောင်းစွာ, we're here to tell you that you don't need to feel this way. You can still maintain these friendships and devel...
ကျွန်မတစ်ဦးကနေအိမ်အခြေခံပြီးစီးပွားရေးကိုဘယ်လို Choose Do?
သငျသညျသိခဲ့ပါ "အိမ်မှာ based စီးပွားရေးလုပ်ငန်း" နှင့် "အိမျကနေအလုပ်" ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အပေါ်အများဆုံးမကြာခဏမေတ္တာရပ်ခံစာပိုဒ်တိုများကြားတွင်ရှိပါတယ်? ကိုယ့်ဟူသောဝေါဟာရကိုထဲသို့ဝင် "အိမျကနေအလုပ်" Google မှာ, ငါနောက်ကျောတယ် 4,730,000,000 ရလဒ်များကို. အဘယျသို့သောသင်ပြောပြဘူး? ဒါဟာဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ပဒေသာနေအိမ်ထဲကနေအလုပ်လုပ်နေနှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဝယ်လိုအားအတူတက်ထားရန်ကြိုးစားနေန်းကျင်ရှိပါတယ်ပြောပြ. ဒါဟာအစစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းမြှင့်တင်ကလူအများကြီးရှိပါတယ်ပြောပြ. Network မှ marketi ...
အမြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့သင့်လျော်စွာသုံးတဲ့အခါ, ကွန်ရက်သင့်ရဲ့အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆောက်အဦး tools များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါပေမဲ့, ရောင်းချမယ့်နည်းလမ်းအဖြစ်ချဉ်းကပ်ကြဘူး. ကွန်ယက်အဖွဲ့သင်သည်အခြားသူများအား၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာဆက်ဆံရေးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့သည်သင့်ဥစ္စာအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးပေးခြင်း Tots အစီအစဉ်တိုးချဲ့သည်ကစားစရာ
ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရိန်းတိုင်းခရစ္စမတ်ကူညီပံ့ပိုးကြောင်း Tots အစီအစဉ်ကိုများအတွက်ကစားစရာ၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီသေချာဖြစ်ကြောင်းကို. ဒါပေမဲ့, သင်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသိရခဲ့ဘူး?
သငျသညျမနာမတျောနှငျ့စီးပှားရေးလုပျငနျးကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်, အဘယ်သူမျှမ-ကွဲပြားခြားနားမှု-ထံမှ-ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီဝိသေသလက္ခဏာ? သင့်ကုမ္ပဏီတံဆိပ်, ကောင်းမွန်စွာပြုကြသည့်အခါ, သငျသညျအလားတူရွေးချယ်မှုတစ်ခုလယ်ပြင်၌ထွက်မတ်တပ်ရပ်ကူညီပေးသည်သာ, ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုလည်းသစ္စာရှိမှုလာအောင်နှိုးဆွကြောင့်စျေးနှုန်း-စျေးဝယ်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ရလဒ်များကိုမကယ်မလွှတ်ကူညီပေးသည်. မထွက်အဘယ်ကြောင့်. ခေါင်းကိုက်ခြင်း #1: ပြိုင်ဘက်များအားလုံးအတူတူပင်ဖောက်သည်တစ်ဦး၏အတွေးအခေါ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ထားနှင့်သင်ရောင်းသောအရာကိုကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ကုမ္ပဏီအတွက်စျေးဝယ်သွားပါပုံရတယ်. လူအပေါင်းတို့သည်ရှေးခယျြစရာပုံပေါ်ပါနဲ့ ...
ကျနော်တို့မှန်ကန်မှုပညာရှိပေးပို့စုစုပေါင်းရဲ့ privacy နဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောဒေတာများကိုပြောင်းလဲန်ဆောင်မှုများ၏အိန္ဒိယအဆင့်မြင့်အနေနဲ့ Outsourcing မှာ Data မှာပေး. ဒေတာကူးပြောင်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုအောင်မြင်စွာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို run ဖို့မဆိုအဖွဲ့အစည်းအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်. sequence ကိုအတွက်မဆိုအဖှဲ့အစညျးတှငျအရေးကွီး၏အဖြစ်ဒေတာများကိုပြောင်းလဲန်ဆောင်မှုသတင်းအချက်အလက်များ၏ဤအသက်အရွယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ကြောင်း. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုမာန်ကမ္ဘာကြီးကိုနည်းပညာအဆက်မပြတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတိုးတက်စေခြင်းနှင့်လွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်. လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းအတွက်
ကမ္ဘာ့ vs USA သို့
မကြာသေးမီကရိုက်တာသတင်းဌာနကခေါင်းစဉ်သစ်တစ်ခုဆောင်းပါး posted "အီးယူအမေရိကန်အခွန်လပ်ချိန်ကျော်ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုသက်တမ်းတိုးဖို့ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိပါသည်။" ဤဆောင်းပါးသည်ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်အတူအမေရိကန်ကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်ဘယ်လိုမီးမောင်းထိုးပြ "ကြီးမားကျယ်ပြပိတ်ဆို့မှုများ" အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများအဖို့ကြီးမားတဲ့အခှနျအားလပ်ချိန်ပေးမယ့်အစီအစဉ်နှင့်အတူရှောက်လျှင်, May 1st စတင်အမေရိကန်တင်သွင်းမှုအပေါ် WTO အားဖြင့်တရားမဝင်ယူဆ.
Each specific industry hasavariety of requirements that an employee has to meet. In searching for jobs as sales professionals, how do you prepare foracompetitive environment? Here are useful tips you could perform in searching the appropriate job and acing the interview. 1) သုတေသန: In order to be prepared on your interview, you should learn important facts about the company beforehand. * The internet is one of the best ways to search for information and most c...
ပူနွေးဆက်သွယ်ရန်များစာရင်းကို Create ရန်ကဘယ်လို
သငျသညျအရောင်းမန်နေဂျာမယ့်နောက်ကျောထိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့ salespeople သူတို့ရဲ့ရုံးခန်းသို့ရောက်နှင့်အကူအညီတောငျးဖို့စောင့်ဆိုင်းရန်အသုံးပြုသည့်အခါကောင်းသော Ole ကာလကိုအောက်မေ့ပါနဲ့? ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့လာနှင့်အနီးကပ်ချသံနှင့်ရိုက်မှအဟောင်းကိုဝါရင့်လိုအပ်. ကောင်းစွာ, ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်ရုံမဆိုပိုပြီးကြောင်းမပွုနိုငျသိ. သေချာတာပေါ့, သောအနိုင်ရရှိကော်လံတွင်ပိုမိုအနည်းငယ်အရောင်းထားမယ်လို့ (ရေတိုသက်တမ်းအတွက်). ဒါပေမယ့်ရေရှည်မှာသင်သည်အဘယ်အရာကိုဖန်တီးမယ်? ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုဒါပေမယ့်ဘယ်အရာကမှ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရောင်းရဆုံးယုံကြည်မှုတစ်ခုအောင်စမပါဘဲမှီခို salespeople. ပုံအလားအလာကိုရန်သင့်ရောင်းအားကလူပြရန်, ပုံချိန်းတင်ထားရန်နှင့်အရောင်းပိတ်ဖို့ရန်ပုံသည်သင်၏အလုပ်ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်လူတိုင်းရဲ့လစာ fatter စေသည်.
သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်အပြောင်းအလဲများ Make ရန်ကဘယ်လို
ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားပြောင်းလဲပစ်ဘို့ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ကြောင့်တခါတရံတွင်ခရုရဲ့အရှိန်အဟုန်မှာတိုးဟန်. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ, အများဆုံးသဘောတူ, ကျနော်တို့ခက်ခဲလိုအပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုအပေါ်သို့သဘောတူရန်ဖိအားပေးလိမ့်မည်ဟုသော်လည်း. အပြောင်းအလဲအတွက်တစ်ခုမှာမက်လုံးပေးယခုအများအပြားဒေသများရှိစတင်ပေးဆောင်-for-performance ကိုအစီအစဉ်များဖြစ်ပါသည်. ကျွန်မမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုဆေးသမားကိုထိခိုက်မယ့်စုံတွဲကိုဖော်ပြရန်ပြီးတော့ advant ယူပြောင်းလဲမှုများချမှတ်ရန်မည်သို့အဖြစ်အနည်းငယ်အကြံပြုချက်များပေးချင်ပါတယ် ...
ဖြားယောင်း၏ခုနစ်အစွမ်းထက်အခြေခံမူနဲ့အတူသင်ဟာဘဝမှာတော့ Want အဘယ်အရာကိုရယူပါ
နိုင်ငံရေးသမားများ, အရောင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, network marketing, အာမခံအေးဂျင့်, လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်, မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုဝင်များအားလုံး၎င်းတို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုမှသဘောတူသငျသညျကိုစိတျဝငျစားရှိ. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသင်မတရားကြိုးကိုင်သို့မဟုတ် Ethics ဖျောင်းဖျခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိသိလား? လည်း, သင့်ရဲ့အခြားသူတွေဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်သင်လက်ခံရရှိဝင်ငွေအဆင့်အကြားတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိ? ယခုရှာဖွေအပေါ် Read!
သစ်စာစောငျ့သိ Customer များ Keeping
တစ်ဦးကဆကျသှယျယောဘကိုရှာပါရန် Craigslist.com သုံးပါရန်ကိုဘယ်လို
မူလစာမျက်နှာ မှစ. လုပ်ငန်းခွင် – Telecommute ထိုအငွေရှာ
paid စစ်တမ်းများ, သင်ကထိပ်တန်းဒေါ်လာ Make နိုင်ပုံ!
7 တစ်ဦးကနေအိမ်-အခြေပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အဖြစ် Break များစီမံခန့်ခွဲရန်နည်းလမ်းများ
ပျော်စရာများနှင့် ပို. အရေးကြီးသည်အမြတ်များအတွက်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းကိုဘယ်လို Started Get မှ
မင်္ဂလာဆောင်အစီအစဉျအလုပ်ရှာဖွေရေး – အဆိုပါမင်္ဂလာဆောင်ဘတ်ဂျက်ပြင်ဆင်နေတွင်သိကောင်းစရာများ
အမြင့် Gain ရန်အဘယ်ကြောင့်အမြင့်အန္တရာယ်ခဲ?
ငွေကို Save သင်၏ကလေးများသှနျသငျဖို့ကိုဘယ်လိုသိကောင်းစရာများ
အဆိုပါ Pretty Woman သီအိုရီ
အရောင်းသင်တန်းအပေါ်သင့် CFO ရောင်းဖို့ကိုဘယ်လို